SP-G10 180ml Rubber Wood Girazi Ultrasonic Aromatherapy yakakosha mafuta Diffuser, China SP-G10 180ml Rubber Wood Girazi Ultrasonic Aromatherapy yakakosha mafuta Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Limited
SP-G10 180ml Rubber Wood Girazi Ultrasonic Aromatherapy yakakosha mafuta Diffuser
Nzvimbo Yokutanga: Ningbo
advertising: ISO9001-2015, CE, RoHS, UL, FCC, SGS
Minimum Order Yakawanda: 500 Pieces
Kupa Mikana: 50000 zvidimbu pamwedzi
180ml Bamboo Girazi Ultrasonic Aromatherapy Diffuser
1.Real Bamboo Finish uye Sleek Dhizaini: Iine inotaridzika uye yakasarudzika kutaridzika, ino diffuser inogadzirwa yemhando yepamusoro yemishenjere huni uye yakafukidzwa neyakaonda unodzivirira jasi re lacquer.
2.Hand Yakagadzirwa Girazi Kavhara: Yekunze yakaitwa yakasarudzika uye yakakosha girazi. Kana zvasvika kune yedu yekutanga yakakosha mafuta diffusers, isu tinoita poindi yekushandisa chero chinhu kunze kweiyo yakafanana -yakanyanya-giredhi giredhi, yakachengeteka, uye eco-inoshamwaridzika zvinhu, pamwe neazvino-e-iyo-e-iyo-ekugadzira maitiro maitiro uye akaomarara mhando kutonga.
3.Warm Yero Yakadzikama Yemasikati: Iyi ultrasonic diffuser inogadzira yekuzorora & yerudo ambience yako. Zviise mukamuri rako kana remwana wako uye ushandise sechiedza chehusiku kwekurara kuzorora.
4.Chipo Chinonyanya Kufunga Chokugadzira: Iyi girazi aromatherapy diffuser ine dhizaini yakasarudzika, inounza kushamisika kuhama dzako neshamwari, ngavazorore uye vanakirwe nemhedzisiro yekurapa kwearomatherapy nemafuta akakosha.
5. Yakachengeteka isina Mvura Auto Off: Inobva yadzima yega kana ichinge yaonekwa pane shoma mvura. Hapana kunetsekana pamusoro pekukonzera chero kukuvadza kwauri kana muchina pachawo.
chiyamuro AC100-240V 50 / 60HZ
goho DC24V, 500mA
zvinhu Girazi + Bamboo + PP
chiedza Yakadziya Yero Yakajeka / isina Simba / Kufema
Mistu Vhoriyamu 20-25ml / h
Nguva Yokupedzisira 6-9hours
chengetedzo Auto magetsi-bvisa kana pasina mvura
Saizi yeyuniti Φ127 * 138mm
Unit uremu 760g
Ruvara rwebhokisi saizi 157 * 157 * 187mm
nhuri 12 zvidimbu / katoni
Ukuru hweCarton 49 * 33 * 39CM
NW / carton 9.2gs
GW / katoni 9.8kgs